တရုတ်ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာအဖုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | DOWODA
ကြေးမုံပွတ်လေဟာနယ် electroplated ရောင်စုံ PVD au ...
CNC ခုံအခုံသော့ခမဟုတ်သောသံမဏိလုပ်ငန်းစဉ်များ ...
အကြီးစား CNC ပြုပြင်ထုံးစံကွန်ပျူတာ gong အပြောင်းအလဲနဲ့ ...
CNC လူမီနီယံအလွိုင်းကိုင်တွယ်လက်လက် proofing precisio ...
ထုတ်ကုန်အမည် လူမီနီယမ်အလွိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာအမှု ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ဒီဂျစ်တယ်အမျိုးအစား
ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းများ စိတ်တိုင်းကျအပြောင်းအလဲနဲ့ ထုတ်ယူခြင်းအမျိုးအစား CNC ကြိတ်စက်
သက်သေပြသံသရာ 3-7 ရက် တိကျစွာ ပြီးသွားပြီ
အပြောင်းအလဲနဲ့သံသရာ 10-15 ရက် အများဆုံးအချင်း 500mm
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း ၀.၂ အများဆုံးအရှည် 1500mm
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ဓာတ်တိုး ကုန်ပစ္စည်းသည်းခံစိတ် 0.01mm
CNC ကြိတ်စက်ကို cnc ကြိတ်စက်ဟုလည်းခေါ်သည်။
အပိုင်းများသည်အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္contာန်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်နိုင်သည်၊ အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
သာမန်စက်ကိရိယာများဖြင့် ပြုလုပ်၍ မရနိုင်သည့် (သို့) ခက်ခဲစွာလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဥပမာ - သင်္ချာပုံစံနှင့် 3D အာကာသကွေးအစိတ်အပိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားသောရှုပ်ထွေးသောကွေးနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၃။ Clamping နှင့် positioning တစ်ခုအပြီးတွင် I-sequence အစိတ်အပိုင်းများကို process လုပ်နိူင်တယ်။
4. မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြောင်းအလဲပြုလုပ်မှုအရည်အသွေး၊ ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာ၏သွေးခုန်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့် 0.001mm ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောတိကျသောကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ၀.၁μm အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင် CNC စက်သည်အော်ပရေတာအမှားများကိုလည်းရှောင်ရှားသည်။
၆။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ CNC ကြိတ်စက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အထူးပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သောအထူးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုကိုများစွာလျော့ကျစေသည့်အတွက်ကြောင့်စီဒီစက်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်ကိရိယာများ၊ ။ သံသရာ။ CNC ကြိတ်ခွဲစက်တွင်ကြိတ်စက်တစ်မျိုး၊ ပျင်းစရာစက်တစ်ခုနှင့်တူးဖော်သည့်စက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွန်အာရုံစူးစိုက်စေသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင်စီဒီစီကြိတ်စက်၏ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းနှင့်အစာအမြန်နှုန်းသည်ပြောင်းလဲမှုမရှိသောကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းပမာဏကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် CNC ကြိတ်ခွဲစက်၏စက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းအပင်ကြိတ်၏မျက်နှာပြင်အရှိန်ကိုမည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း။ Hongweisheng Precision Technology သည်သင်နှင့်မျှဝေမည်။
1. လေ့ကျင့်ခန်း၏အချင်းဝက်ဆုံးဖြတ်ရန်။ သင်ဤနည်းနှစ်နည်းဖြင့်တစ်ခုလုပ်နိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်ကြိတ်ခွဲစက်၏အချင်းကိုတိုင်းနိုင်ပြီးအချင်းဝက်ရရန် ၂ ကိုစားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၅ မီလီမီတာကို ၂ နှင့်စားခြင်း။ အချင်းဝက်၏နှစ်ဝက်ခွဲသည်မီတာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ သို့မဟုတ်တိပ်ခွေကိုပတ်ပတ်လည်ပတ်ပတ်လည်တွင်ပတ်ထားပါက၎င်း၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာကိုရပြီးလျှင်ပမာဏနှင့်စားပါ
2x PI (3.14) မှာ။ ဥပမာပတ် ၀ န်းကျင်သည် ၁၂.၅၆ မီလီမီတာဖြစ်ပါကအချင်းဝက်သည် ၂ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
2. သတ်မှတ်ထားသော angular အလျင်၏ယူနစ်မှာ Hertz အဆုံးကြိတ်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် angular velocity RPM ရှိရင် Hertz ရဖို့ 60 ကိုစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, 600RPM 10 Hz ဖြစ်ပါတယ်။
အကြီးစား CNC စက်
လူမီနီယမ်လက်ရှေ့ပြေးပုံစံမော်ဒယ်သက်သေပြ cnc proc ...
ကြေးမုံပွတ်လေဟာနယ် electroplated ရောင်စုံ P ကို ​​...
CNC လူမီနီယံအလွိုင်းပြုပြင်လက်လက် proofing ...
လူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် panel ကို
CNC စက်စက်စင်တာထုတ်ယူခြင်း, CNC လက်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ယူခြင်း, စက်ပစ္စည်းကိရိယာ Shell, CNC တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်ယူခြင်း, CNC သံမဏိထုတ်ယူခြင်း,5ဝင်ရိုးတန်း CNC ခုံ,